I-21 YEEPHULI ZOKUDADA EZIDALA ZABANTU ABADALA 2020-IIMPAWU EZIPHOLILEYO ZOKUQUBHA - UMSEBENZI WOKUSEBENZA
I-21 yeephuli zokudada eziDala zaBantu abaDala abafuna ukuphosa itheko lehlobo lasehlotyeni
Abaphume ngaphandle baseAmazon / baseDolophini
Ngeempelaveki zoSuku lweSikhumbuzo kwisibuko esingasemva, ihlobo liqale ngokusesikweni kwaye oko kuthetha ukuba lixesha lokuba ubethe echibini kwaye uthambise abanye ivithamini D. ilanga -esondlo Eyona ndlela yokutyibilika emanzini? Idama lokudada, ewe. Kodwa nayiphi na i-ol float ayinakuyenza. Ukudada okugqibeleleyo kwabantu abadala kusebenza kakhulu: Ingabamba Ukuhlaziya i-cocktail , nikezela ukutya kwakho kwisitya, unike umthunzi kwimitha yelanga enamandla, ikwenze uzive ukhululekile, kwaye utshatise ubuntu bakho kunye nomxholo wepati. Kungenxa yokuba, masijongane nayo: Iqela elinemixholo ngaphandle kokufumana izinto ezifanelekileyo alinakuyifumana i-Instagram kunye neFacebook iyathanda ukubeka i-soiree yakho yehlobo emephini. Oko kwathethi, nantsi eyona ndawo intle yokuntywila echibini:
Usuku kumachibi alunakugqitywa ngaphandle kwesi siqithi se-watermelon. Ingabamba ngokulula abantu ababini kwaye ilungele ukuhlala ngokuzonwabisa kumhla welanga. Funda incwadi kuyo, thatha ubuthongo — khumbula nje ukusebenzisa ezinye zazo i-sunscreen nge-SPF ubuncinci engama-30! Sityumza kanzima kwimibala eqaqambileyo kwaye eqaqambileyo, eya kukukhumbuza ukuba kutheni ulithanda ihlobo kakhulu.
2 Ixabiso le-Avocado Pool Float IAmazon Jasonwell amazon.com $ 22.99$ 19.99 (13% icinyiwe) THENGA NGOKU
Abathandi beavokhado baya kuyivuyela le ndawo yokudada efana neziqhamo zabo ezizithandayo. Kodwa nokuba awuyontshatsheli enkulu yeavokhado, eli chibi lokuntywila liza kukunceda uhlale kamnandi ngelixa ugcina i-bum yakho intle kwaye ipholile emanzini. Yijula ​​emngxunyeni ehlaselweyo ujikeleze umdlalo omnandi webhola yevoli.
3 Ixabiso lokuhlalisa iphuli yeLounge inflatable IAmazon Intex amazon.com$ 20.19 THENGA NGOKU
Yass, uKumkanikazi. Esi sihlalo sokuphumla sijongeka njengesihlalo sobukhosi emanzini kwaye silungele ukumkanikazi (okanye ukumkani) wolwandle. Eyilwe ngesiphatho sekomityi esakhelweyo kunye nesitayile esintofontofo, le float iya kuyigcina ifrosi yakho okanye ibhiya ngasecaleni kwakho xa ulungele ukuthatha i-sips. Izinto azifumaneki kubunewunewu ngakumbi kunale.
ezona vibrator zibalaseleyo kubudlelwane bemigama emide
4 Iphuli yokudada yeNdiza ye-Unicorn IAmazon Jasonwell amazon.com$ 36.99 THENGA NGOKU
Phila ngaphandle kwamaphupha akho obuntwana ngokukhwela i-unicorn ngale ndawo inombala kunye nebluey float. Inkulu kwaye yomelele, inokubamba abantu abadala ababini okanye abantwana abancinci ngaphandle kokutsiba. Siyathembisa: Umnyama wayo uya kukuphakamisa, nkqu nangemini enamafu.
5 Inflatable Rainbow Cloud Isiphathi Holder IAmazon Jasonwell amazon.com $ 14.99 ngexabiso$ 12.74 (15% icinyiwe) THENGA NGOKU
Ngaba ufuna ukuzaliswa kwakhona kwiglasi kwiwayini? Kwaye, ngaba umntu angadlula eso sitya seetshiphusi? Cinga ngale nto ibambe indebe njenge inflatable boy boy. Ingafaka ii-cocktails, iinkonkxa kunye neebhotile, kwaye ungazalisa isifuba sokutya kunye nokutya okuncinci kunye neeshes ezikulumayo.
6 Ixabiso le-Mermaid Tail Pool edibeneyo IAmazon Jasonwell amazon.com $ 29.99$ 21.99 (27% icinyiwe) THENGA NGOKU
Ngaba i-neon pink mermaid phandle endle? Uyabheja! Nokuba uhlala echibini eliselumelwaneni okanye elunxwemeni, le ndawo yokutsala ingqalelo iya kuqalisa iincoko ezimbalwa kwaye ujike iintloko ezimbalwa. Kwaye ngohlobo olukhulu lwebhedi ezimbini ezikhawulezayo, le dada lokuntywila ligcwalisa ukuya kuthi ga ngokukhawuleza okungaphezulu kwesihlanu.
7 Sawa Iphenyane leRaft IAmazon FUDOSAN amazon.com THENGA NGOKU
Lola izakhono zakho ngephenyane ngezi ziqhufu ezifana nobomi eziza nephedi yokutshatisa. Kuba zibaleka zincinci, uya kubandakanyeka kwisiseko sakho njengoko ukhwela kuzo. Ngubani othi ulonwabo emanzini alunakuba nakho ukuzilolonga? Cwecwa kunye nabo echibini ukuze iinyawo zakho zimanzi ngaphandle kokuzifaka emanzini.
8 Sawa Ipinapple Pool Float IAmazon Vickea amazon.com$ 24.99 THENGA NGOKU
Ukuba uchitha usuku ulele echibini, chola le float inemibala eqaqambileyo. Inamaphaneli athambileyo aya kuthi axhase amagophe endalo omzimba wakho, ngelixa uhleli uthe tyaba ngokwaneleyo ukuba ungafunda incwadi okanye utye isidlo.
9 USihlalo odadayo Pool Lounger nge Canopy IAmazon GINZICK amazon.com THENGA NGOKU
Esi sihlalo sidadayo siyakukhusela elangeni ngelixa wonwabela amanzi ahlaziyayo apholileyo phantsi kwakho. Siyayithanda into yokuba ikwanayo nendebe yokusela ukuze uhlale uhlaziyekile imini yonke.
10 Ipaki yedragini yoMlilo IAmazon GoFloats amazon.com$ 19.99 THENGA NGOKU
Ukufowuna bonke Imidlalo yeethrone abalandeli: Isiteshi sakho sangaphakathi seDaenerys Targaryen -onina weedragons-ngeli phulo lidlamkileyo lokudada. Ngelixa singenakuqinisekisa ukuba iyakothusa nabaphi na ookrebe, ngokuqinisekileyo yenza ukuba ubukho bakho baziwe kwiqela lephuli.
Shumi elinanye Glitter Tiger Pool edadayo Abaphuma ngaphandle ezidolophini Abaphuma ngaphandle ezidolophini dengcangcang.com$ 29.00 THENGA NGOKU
Ehlotyeni, ipati yepati inokuziva ngathi ihlathi. Yilawule ngaphezulu ngale glitter-infused tiger pool float. Iyakhazimla elangeni, ke uya kujongeka woyike.
12 I-Glitter Rosé Pool edadayo Abaphuma ngaphandle ezidolophini Abaphuma ngaphandle ezidolophini dengcangcang.com$ 19.00 THENGA NGOKU
Ewe ungayifumana i-rosé yakho kwaye uyidadise kuyo, nayo! Ibhotile ye-rosé e-humungous ine-glitter ngaphakathi ukufanisa i-fizz yayo yobomi bokwenyani. Ikwanayo nendebe yecala ecaleni, ukuze uhlale ubomi bakho bonke emanzini.
13 Izithethi ezidadayo Abaphuma ngaphandle ezidolophini Abaphuma ngaphandle ezidolophini dengcangcang.com$ 24.00 THENGA NGOKU
Ezi zithethi zidadayo, zingashukumi manzi zifanelekile kwabo babamba itheko. Iya kudlala iihits zakho ozithandayo kwaye ufumane isihlwele sokuntywila kulonwabo.
14 Ixabiso lePopsicle Pool Float IAmazon WJHFF amazon.com$ 56.36 THENGA NGOKU
Izibuko zelanga, jonga. Umnqwazi Olubanzi-brimmed, khangela. I-Popsicle float, jonga. Ijongeka intle kamnandi, uya kufuna ukuluma kule bhola idadayo enemibala eqaqambileyo ngemini eshushu. Yisebenzise ngokutya okulula, iziselo, kunye neemagazini xa ujinga ngaselwandle.
Shumi elinantlanu Iseti yePhuli yeWayini yeWayini Abaphuma ngaphandle ezidolophini Abaphuma ngaphandle ezidolophini dengcangcang.com$ 10.00 THENGA NGOKU
SOS, iwayini eninzi, nceda! Nokuba uphunga iaperol spritz (ungakhathazeki, asikugwebi) okanye i-IPA, ezi ndawo zijikelezileyo zilungele ukuhambisa iziselo ngeentsuku ezishushu echibini.
16 Sawa Icebo Pizza Slice Pool edadayo IAmazon Qubha embindini amazon.com $ 63.44$ 24.50 (61% icinyiwe) THENGA NGOKU
Xa ilanga libetha iliso lakho njengepayi enkulu ye-pizza, kulungile. Ukuba ipitsa kukutya okuthandayo, ungakuzisa kwiqela lepati ngesi silayi sikhulu. Ibhonasi: Iza kunye nabanini beziselo ezimbini. Cela abahlobo bakho ukuba bathenge isilayi sabo ukuze benze ipayi epheleleyo echibini!
17 Idreyini yeCactus Pool Ithagethi IQela leLanga Ukujoliswa.com$ 20.00 THENGA NGOKU
Oku kupholileyo, iCoachella-vibin 'cactus echibini lokudada liyokuhambisa kwindawo yokubaleka yetropiki. Ingabamba ukuya kuma-200 eepawundi kodwa ilula kakhulu kwaye kulula ukuyicoca.
Inombolo ye-333 enentsingiselo
18 I-Strawberry Frosted Donut Pool edadayo Ithagethi IQela leLanga Ukujoliswa.com$ 15.00 THENGA NGOKU
Ngokufafaza kwemvula kunye nokulunywa okukhulu ecaleni, le pinki iqabaka iflat ngokuqinisekileyo iya kwenza iindwendwe zakho zedama lephuli ... Yisebenzise xa uzulazula ujikeleze okanye njengebhodi yokukhaba ukuze uziqhelanise nemivimbo yokudada enamaqhinga.
19 Ibhanana isihlalo sokuntywila echibini Ithagethi IQela leLanga Ukujoliswa.com$ 15.00 THENGA NGOKU
Ilungele impilo kunye nentlalontle yempambano, le bhanana iyonwabisa iya kudibanisa ubuntu bakho kwaye vumela ukuthanda kwakho ukutya kukhanye elangeni.
Amashumi amabini Ipuli yePhuli enkulu Ithagethi IQela leLanga Ukujoliswa.com$ 15.00 THENGA NGOKU
Ukufezekisa iqela le-bachelorette okanye i-90s nostalgia party, eli phuli lidadayo luguqulelo olukhulu lweRing Pop ethandekayo. (Uyazi, ilekese elukhuni eringi.) Siyayithanda ukuba inombala omdaka weepaneli ezingqindilili nezidlulayo ukuyinika ubukhulu-njengedayimane yokwenyani.
amashumi amabini ananye I-Intex yeFrench Fries Pool yokudada Walmart Intex Walmart.comIidola ezingama-29.90 THENGA NGOKU
Ukuba kukho nantoni na esiyithandayo ngaphezu kwe-cheeseburger kunye nezinja ezishushu kwindawo yokupheka, ziifries zaseFrance. Bonisa uthando lwakho ngegolide, iitapile ezicoliweyo kunye nale ndawo yokudada, elungileyo kumntu omnye-akukho sabelo esivunyelweyo-indlela esizithanda ngayo iifriji zethu.
Ingelosi inombolo 1111 intsingiselo kunye nokubaluleka
iintloko zeesuti zokuhlamba amabele amakhulu
ukumisa njani amadolo ekuqhekekeni
ukunciphisa umzimba emva kwamabali empumelelo angama-50
lithetha ntoni inani leengelosi ezili-111